Qiyaasaha Muhiimka ah ee Falanqaynta ee Suuqgeynta Gudaha | Martech Zone
Xitaa shirkadaha ugu waaweyn waxay la halgamayaan jaangooyooyin raadraac ah. In ka badan toban sano ayaan sidaas iri Analytics had iyo jeer waxay soo saartaa su'aalo ka badan inta ay ka bixiso jawaabaha maaddaama isticmaaleyaashu ay kala qaybinayaan, kala sifeynayaan, ayna falanqeynayaan taraafikada Isku dar taas xaqiiqda ah in ka badan kalabar dhammaantiin Analytics taraafikada waxaa soo saari kara bots, runtiina waad ka tagtay inaad madaxa xoqdo inta badan.
Mojo Media Labs ayaa soo saartay sawirkan, Tilmaamaha Suuqa Soo-galista ee Xogta & Falanqaynta. Waxay bixisaa marxalado murugsan iyo sidoo kale hagitaan ku saabsan halbeeg kasta oo muhiim ah oo loogu talagalay suuqgeynta gudaha iyo sidoo kale sida badanaa loo hubiyo mitir kasta.
Daily - waxaa ka mid ah booqashooyinka, tilmaamaha, macaamiisha, soo booqdaha si loogu beddelo heerka beddelka, horumarka sanad ka badan ee sannadka, u horseedaya heerarka beddelaadda macaamiisha, iyo qodobo u gaar ah mid kasta.
2 ilaa 3 jeer usbuucii - kormeer ilaha taraafikada, booqashooyinka isha taraafikada, hogaaminta iyo sicirka beddelka ilaha gudbinta iyo sidoo kale isbeddelada sanadka sanadka iyo isbarbardhigga cabirka.
2 ilaa 3 jeer bishii - dib u eegid xogta gunta ee ilaha taraafikada kasta, ujeedo iyo dabeecad, iyo horumarka sanadba sanadka ka dambeeya isbarbardhigga cabirka.
1 ilaa 2 jeer bishii - dib-u-eegis ereyada muhiimka ah, bogagga degitaanka, cabbiraadaha emaylka, waxqabadka wicitaanka, waxqabadka bulshada, kuwa jecel bulshada iyo saamiyada, baloog Analytics, iyo xiriiriyeyaasha soo gala, iyo ku habboonaynta raadinta.
Hal talo oo kaa caawin karta ayaa ah inaad gadaal u shaqeyso. Shirkadaha badanaa way furan yihiin Analytics oo ka bilow qofka booqanaya bogga guriga. Bedelkeeda, fur Analytics oo u fiirso beddelaaddaada, ka dibna mashiinka beddelashadaada, oo dib ugu noqo boggaga iyo tixraacyada. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad diirada saarto cabbiraadaha muhiimka ah ee ganacsiga wadda halka aad ka jahwareeri lahayd cabirrada laga yaabo inayna muhiim ahayn.
Tags: Analyticsheerarka falanqayntadhacafalanqaynta blogkawaxqabad-wacashoheerka beddelkawaxqabadka ctaMacaamiishahorumarka sanadkacabirrada emaylkaxidhiidhada soo socdahalbeegyada muhiimka ahkeywordspage degteymacmiil u horseedraadadjaangooyooyinkasoo socda bulshadajecel bulshadawadaagista bulshadailaha taraafikadadhaqanka martidabooqde-u-hoggaaminBooqashadabooqashooyinka isha taraafikada